विप्लब माओबादी नेताले भने मलाई किन राजतन्त्रसंग जोडियो ?::RATONEWS
विप्लब माओबादी नेताले भने मलाई किन राजतन्त्रसंग जोडियो ?
नेकपा माओवादीका नेता भरत बम ‘रणबीर’ ले आफुले डिसेम्बर २९ मा सामाजिक सञ्जाल फेुसबुकमा लेखेको स्टाटसलाई लिएर केही सञ्चार माध्यामले तथ्य बङ्ग्याई भ्रमात्मक समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका छन् । नेकपा माओवादीका पोलीटव्यरो सदस्य एवं भेरी कर्णली राज्य इन्चार्ज समेत रहेका नेता रणबीरले ननस्टपखबरसँग कुरा गर्दै भने, “अहिलेको सङ्कटको सबैले बिकल्प र निकास खोजिरहेका छन् तर यो देशका दलाल शासक र तिनका मालिकहरु सेनालाई सक्रिय बनाएर राजतन्त्र फर्काउने रणनीति कार्यन्वयन गर्नमा लागेका छन् ।” नेता बमले केही सञ्चारमाध्यामले माओवादीका सकारात्मक भन्दा नकारात्मक समाचार खोज्ने र सम्प्रेषण गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै यसरी तथ्यलाई नबङ्ग्याउन आग्रह गरे । आफ्नो पार्टीको एकता र प्रगति देखेर नक्कली माओवादीहरु ईष्या र डाहाले जलेको भन्दै उनले तिनीहरुले आफुहरुकाबारे नकारात्मक भ्रम छर्ने काम गरेका आरोप लगाए । नेता बमले बर्तमान संकट बहुदलीय संसदीय व्यवस्था असफलताको परिणाम भएको ठोकुवा गर्दै यस्तो बेला विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले आआफ्नै दाउपेच चालेको बताए । त्यो दाउपेचमा नेपाली सेनालाई सक्रिय पारेर राजतन्त्र फर्काउने योजना विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै संसदवादी दलहरुले विदेशी बलमा उपनिवेशवाद ल्याउने र उत्कर्षमा विदेशी सेना ल्याउने र राजतन्त्र फर्काउन सेना सक्रिय पार्ने लाइन रहेको उनले बताएका छन् । नेता बमले यी कसरतहरुलाई रोक्न जनमुक्ति सेना निर्माण गरेर जनवादी क्रान्ति गर्ने सोचिरहेको बताए । साथै माओवादीले नेपाली सेनासँग संयुक्त मोर्चा बनाएर उपनिवेशवाद र राजतन्त्रको पुनरागमनका सम्भावनाहरुलाई रोकेर देशलाई मुक्त पार्ने लाईन लिनुपर्ने सुझाव बमले दिएका छन् । तर, केही अनलाइनहरुले पहिलो बुदालाई नबुझेरै तथ्य बङ्ग्याएर नेकपा माओवादीका नेता भरत बमले राजतन्त्र पुनस्थापना बर्तमान समस्याको एक विकल्प हुनसक्ने टिप्पणी गरेका र सैनिक शासनलाई अर्को विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै समाचार प्रकाशन गरेका थिए । आज डिसेम्बर ३१ मा पुनः नेता रणबीरले अघिल्लो स्टाटसबारे प्रष्ट पार्दै कस्को लाईन के हो ? भनेर प्रष्ट्याएका छन । ननस्टप खबरमा दिया चन्दले लेखेकी छन ! !
बमले लेखेको प्रेस नोट यस्तो छ ;
पौष 15 गतेको फेसबुक स्टाटसलाई लिएर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लगायत सामाजिक संजालको राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रस्ताव शिर्षकको समाचार प्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सर्वप्रथम, पार्टीको बैठकमा राजतन्त्र बारे छलफल चलेको वा प्रस्ताव गरेको भन्ने अनर्गल,कपोलकल्पित,मनगदेन्ते र भ्रामक समाचार राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी र प्रतिक्रान्तिकारी बिचार द्वारा प्रेरित छ । यो समाचारले क्रान्तिकारी ( बिप्लब माओवादी ) र रास्ट्रवादी ( जनता र अन्य रास्ट्रवादीहरु) को तेजोबोध गर्ने कुत्सित मनशाय बोकेको छ । त्यसैले यो सुनियोजित गलत समाचारको जोडदार खण्डन गरिन्छ ।
स्टाटसका2पक्ष छन । पहिलो संभाबित खतरा, दोस्रो पार्टी लाईन । पार्टी लाईन बारे स्पष्ट गर्दै भनिएको छ । हाम्रो ( पार्टीको ) रोजाइ ( आधिकारिक लाइन) जनवादी क्रान्ति द्वारा जनवादी अधिनायकवाद स्थापना गर्नु हो । दोस्रो अथवा सहायक रोजाइ यदि संकट गहिरिदै गएर बिशेश स्थिति पैदा भए पार्टीले लिने बिशेश नीति हो । यस्को मर्म नेपाली सेना ( यदि रास्ट्रवादी छ भने) ले अब बिदेशी र दलालहरुलाई हैन, नेपाली जनता र माओवादी लाई साथ दिनुपर्छ । भन्ने हो, जो धारणा पार्टीको नितिको प्रतिकुल छैन । रास्ट्रवादी शक्ति नेपाली क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण शक्ति हुने तथ्य एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा स्पष्ट नै छ ।
अन्तमा साम्राज्यवादले क्रान्तिका विरुद्ध बन्दुक भन्दा पहिले कलम प्रयोग गर्दछ । हामीले कलम र बन्दुक दुबैको जबाफ दिनुपर्छ । यो समाचार ले नकारात्मक असर परेको प्रती दुख व्यक्त गर्द्छु ।
भरत बम ( रणवीर)
मिति- 2072 पौष 16 गते
उनले लेखेको स्टाटस जसलाई मिडिया उल्टो अर्थमा समाचार बनेका थिए !
बर्तमान संकट बहुदलीय संसदिय ब्यबस्था असफलताको परिणाम हो । समाधानका उपाय निम्न हुनसक्छन् ।
1) सैनिक कू / शासन र त्यसपछि राजतन्त्रको पुनःस्थापना अनि सामन्ती अधिनायकवाद ।
2) बिप्लव माओवादीको बिद्रोह र जनवादी अधिनायकवाद ।
3) माओवादी र सेना मिलेर राष्ट्रिय बिद्रोह अनि रास्ट्रवादी अधिनायकवाद ।
4) बर्तमान दलाल सत्ता सासकको निरंतरता बिदेशी सेनाको उपस्थित र उपनिबेसवाद ।
हाम्रो पहिलो रोजाई2हो, र दोस्रो रोजाइ ३ हो ।